Uyenza njani ubungakanani kwakhona beempawu zeDock | Ndisuka mac
Ngalo lonke ixesha abafana abavela eCupertino bekhupha ingxelo entsha ye-macOS, kusoloko kucetyiswa ukuba kwenziwe ufakelo olucocekileyo, ukususela ekuqaleni, ukuze singatsali iingxaki zomsebenzi kwinguqulelo entsha ye-macOS. Njengokuba iinyanga zihamba, kunokwenzeka ukuba iDock yethu inenani elikhulu lezicelo, izicelo ekunokuthi ngamanye amaxesha singazisebenzisi nangaliphi na ixesha, kodwa besisoloko sinazo apho kunokwenzeka, ukuba kunokwenzeka. Xa inani lezicelo kwi-Dock liphezulu kakhulu, kunokwenzeka ukuba kufuneka sinciphise ubungakanani beempawu eziboniswe kwiDock ukuze xa ubeka imouse phezu kwayo, qhubeka ugcwalisa yonke ikhusi ngaphandle kokuyishiya.
Ngethamsanqa amathuba okwenza ngokwezifiso kwi-MacOS Dock alunge kakhulu. Singayitshintsha indawo ebekwe kuyo ukuze endaweni yokuba ibekwe ezantsi, ukuba ibekwe ngasekunene okanye ngasekhohlo kwesikrini. Singayilungiselela ukuba ifihlwe ngokuzenzekelayo kwaye ivele kuphela xa sibeka imouse ngaphezulu kwenxalenye apho kufanele ukuba ibe khona (ezantsi, ekunene okanye ekhohlo). Kodwa ikwasivumela ukuba sitshintshe ubungakanani beempawu ezibonakalayo kuyo.
Guqula ubungakanani beempawu zeDock
Kuqala siya kwiiNkqubo ezikhethwayo.
Emva koko, nqakraza kwiDock, uphawu lwesithathu olufumaneka phezulu kwimenyu.
Kwiwindow elandelayo siya kubungakanani, ukhetho lokuqala oluvelayo.
Ukutshintsha ubungakanani beempawu zeDock kufuneka nje sihambise isalathi siye ngasekunene, ukuba sifuna ukubenza bancinci, okanye ngasekhohlo ukuba sifuna ukubenza bakhulu.
Njengoko sihambisa isalathi, sinokubona iziphumo ngokuthe ngqo eDock, ukuze sikhawuleze sazi ukuba leliphi elona nyathelo lihambelana neemfuno zethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyenza njani ubungakanani kwakhona beempawu zeDock